ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို အသုံးချထားတဲ့ ကာယလေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို အသုံးချထားတဲ့ ကာယလေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ ခု
ဒီလို ကိုယ်အလေးချိန်ကို သုံးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ Gym သွားဖို့ မလိုပဲ ဘယ်နေရာမဆို လုပ်နိုင်ရုံမကပဲ အလေးမတာတွေထက် အရိုး အကြော၊ အရွတ်၊ အဆစ်အမြစ်တွေ သက်သာစေပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ ခုကို မရပ်ပဲ ဆက်တိုက်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ၂ မိနစ်၊ ၃ မိနစ် နားပါ။ ပြီးရင် လုပ်နိုင်သလောက် ထပ်ထပ်လုပ်ပါ။ အစပိုင်းမှာ အခက်အခဲ အချို့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အားမလျော့ပါနဲ့။ အသက်ရှု မမှားပါနဲ့။
လက်တွေ ခြေတွေကို ပခုံးအကျယ်လောက် ခွဲထားပြီး မှောက်ထားပါ။ တင်ပါးကြွထားပါ။ မေးစေ့ကို ရင်ဘတ် ဘက်ကို ဆွဲထားပါ။ပြီးရင် လက်မောင်းတွေကွေးလိုက်ပါ။ တင်ပါးကို ချလိုက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြမ်းပြင်နဲ့ ထိထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် လက်တွေ၊ ခေါင်းတွေကို ဆန့်ထုတ်လိုက်ပါ။ ကျောကို ကွေးလိုက်ပါ။ တင်ပါးတွေကို ခေါက်ထားပါ။ နေနိုင်သလောက် နေပေးပါ။
ခြေထောက်တွေကို ပခုံးအကျယ်ထက် နည်းနည်းလေး ပိုပြီး ခွဲရပ်နေပါ။ လက်တွေ ရှေ့ဆန့်ထားပါ။ကျောကို မတ်မတ်ထားပြီး သင့်ပေါင်တွေ ကြမ်းပြင်နဲ့ အပြိုင် ဖြစ်တဲ့အထိ ဒူးကွေးချပါ။ ခဏရပ်ပြီး နဂိုပုံစံပြန်သွားပါ။ သင့်ရဲ့ ဒူးတွေ ခြေမတွေရှေ့ မရောက်ပါစေနဲ့။ ၁၅ ခေါက် လုပ်ပါ။
၃. Crunch Twist
ပုံမှန် အိပ်ထမတင် ပုံစံ နေပါ။ အိပ်ထမတင် ထလိုက်ပါ။ ခဏရပ်ပြီး သင့်ရဲ့ ညာဘက် တံတောင်ကို ဘယ် ဒူးဆီ လှည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဘယ်တံတောင်ကို ညာဒူးဆီ လှည့်ပါ။ ပုံမှန် ပြန်နေပါ။ ပြန်လှဲပါ။ ၁၅ ခေါက် လုပ်ပါ။
၄. Back Row
ခြေကို ပခုံးလောက် ခွဲရပ်ထားပါ။ ဒူးနည်းနည်း ကွေးထားပါ။ လက်တွေကို လက်သီးဆုပ် ဒေါင်လိုက်ထားပြီး ရှေ့ဆန့်ထားပါ။ အသက်ရှုထုတ်ရင်း လက်သီးတွေကို အလေးကြီး တစ်ခုခုကို ဆွဲနေရသလို ဆွဲယူလိုက်ပါ။ လက်တွေ နံရိုး ရောက်သွားရင် အသက်ရှုသွင်းရင်း ပြန်ဆန့်လိုက်ပါ။ တင်းတင်း လုပ်ပါ။ ၁၅ ခေါက် လုပ်ပါ။
၅. Calf Raise
ကိုယ်အလေးချိန်ကို ညာခြေပေါ် ထားပြီး ရပ်လိုက်ပါ။ ညာဒူးနည်းနည်းကွေးထားပါ။ ဘယ်ခြေကို နည်းနည်းလေး ကြွထားပါ။ လက်တွေကို တင်ပါးမှာ တင်ထားပါ။ ဖြည်းဖြည်းခြင်း ခြေဖျားထောက်ပါ။ ထိပ်မှာ ရပ်ပါ။ ပြီးရင် ပြန်လျော့ပါ။ ခြေတစ်ချောင်းကို ၁၅ ခေါက် လုပ်ပါ။
နံရံတစ်ခုကို မျက်နှာမူထားပါ။ လက်တွေ ကြမ်းပေါ် ပခုံးထက် နည်းနည်းကျယ်ကျယ်နဲ့ နံရံက ပေဝက်လောက် အကွာမှာ ထောင်ထားပါ။ ခြေနှစ်ဖက်စလုံး နံရံကို ထိသွားသည်အထိ ခေါင်းပေါ်ကနေ နောက်ပြန်ကန်လိုက်ပါ။ ခြေနှစ်ချောင်း ပူးထား၊ ခြေမကို ထောင်ထားပါ။ ၁၅၊ ၂၀ စက္ကန့် ရအောင်နေပါ။
ဘယ်လက်သီးကို ဘယ်ပေါင်ပေါ် ထားပါ။ ညာလက်နဲ့ ဘယ်လက်ကောက်ဝတ်ကို လက်ပေါ်က ကျော်ကိုင်လိုက်ပါ။ ဘယ်လက်မောင်းကို အပေါ်ကို ကွေးပါ။ ညာလက်က တွန်းချနေပါ။ အဆုံးရောက်သွားရင် ညာလက်တွန်းထားတုန်းမှာပဲ နဂိုပြန်ရောက်တဲ့အထိ တဖြည်းဖြည်း လျော့သွားပါ။ လက်တစ်ဖက်ကို ၁၀ ခါစီ လုပ်ပေးပါ။
၈. Front Prank
မှောက်ခုံ လှဲပါ။ ကျောကို မတ်မတ်ထားပြီး ခြေချောင်းတွေနဲ့ လက်မောင်းတွေကို သုံးပြီး တစ်ကိုယ်လုံး မလိုက်ပါ။ ကြာနိုင်သလောက် ကြာအောင် တောင့်ထားပါ။ မတောင့်နိုင်တဲ့အထိ၊ ကိုယ်ကွေးလာတဲ့အထိ တောင့််ထားပါ။
၉. Split Lunge
ပုံမှန် Lunge ပုံစံအတိုင်း ဘယ်ခြေရှေ့ထုတ်ထားပါ။ ဒူးက ခြေဖနောင့် အထက်မှာ ရှိနေပါစေ။ ခုန်လိုက်ပြီး ပြန်အကျမှာ ညာခြေရှေ့ထုတ် ဖြစ်နေပါစေ။ ဒူးက ခြေဖနောင့်အပေါ်မှာပဲ ရှိရပါမယ်။ ၁၀ ခေါက် လုပ်ပါ။
၁၀. Plyo Push-Up
ပုံမှန် ဒိုက်ထိုးတာတွေက လွယ်လွန်းတယ် ဆိုသူတွေ အတွက်ပါ။ ဒိုက်ထိုးလို့ အပေါ်ကို ကြွသွားတိုင်း လေထဲမြောက်သွားအောင် တွန်းပစ်ပါ။ တတ်နိုင်ရင် လက်ခုပ်တစ်ချက်ရအောင် တီးပါ။ ၆ ခါ လုပ်ပါ။
ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကို အသုံးခထြားတဲ့ ကာယလကေ့ငျြ့ခနျး ၁၀ ခု
ဒီလို ကိုယျအလေးခြိနျကို သုံးတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှဟော Gym သှားဖို့ မလိုပဲ ဘယျနရောမဆို လုပျနိုငျရုံမကပဲ အလေးမတာတှထေကျ အရိုး အကွော၊ အရှတျ၊ အဆဈအမွဈတှေ သကျသာစပေါတယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျး ၁၀ ခုကို မရပျပဲ ဆကျတိုကျလုပျပါ။ ပွီးရငျ ၂ မိနဈ၊ ၃ မိနဈ နားပါ။ ပွီးရငျ လုပျနိုငျသလောကျ ထပျထပျလုပျပါ။ အစပိုငျးမှာ အခကျအခဲ အခြို့ တှရေ့မှာ ဖွဈပမေယျ့ အားမလြော့ပါနဲ့။ အသကျရှု မမှားပါနဲ့။
လကျတှေ ခွတှေကေို ပခုံးအကယျြလောကျ ခှဲထားပွီး မှောကျထားပါ။ တငျပါးကွှထားပါ။ မေးစကေို့ ရငျဘတျ ဘကျကို ဆှဲထားပါ။ပွီးရငျ လကျမောငျးတှကှေေးလိုကျပါ။ တငျပါးကို ခလြိုကျပါ။ ခန်ဓာကိုယျကို ကွမျးပွငျနဲ့ ထိထားလိုကျပါ။ ပွီးရငျ လကျတှေ၊ ခေါငျးတှကေို ဆနျ့ထုတျလိုကျပါ။ ကြောကို ကှေးလိုကျပါ။ တငျပါးတှကေို ခေါကျထားပါ။ နနေိုငျသလောကျ နပေေးပါ။
ခွထေောကျတှကေို ပခုံးအကယျြထကျ နညျးနညျးလေး ပိုပွီး ခှဲရပျနပေါ။ လကျတှေ ရှဆေ့နျ့ထားပါ။ကြောကို မတျမတျထားပွီး သငျ့ပေါငျတှေ ကွမျးပွငျနဲ့ အပွိုငျ ဖွဈတဲ့အထိ ဒူးကှေးခပြါ။ ခဏရပျပွီး နဂိုပုံစံပွနျသှားပါ။ သငျ့ရဲ့ ဒူးတှေ ခွမေတှရှေေ့ မရောကျပါစနေဲ့။ ၁၅ ခေါကျ လုပျပါ။
ပုံမှနျ အိပျထမတငျ ပုံစံ နပေါ။ အိပျထမတငျ ထလိုကျပါ။ ခဏရပျပွီး သငျ့ရဲ့ ညာဘကျ တံတောငျကို ဘယျ ဒူးဆီ လှညျ့လိုကျပါ။ ပွီးရငျ ဘယျတံတောငျကို ညာဒူးဆီ လှညျ့ပါ။ ပုံမှနျ ပွနျနပေါ။ ပွနျလှဲပါ။ ၁၅ ခေါကျ လုပျပါ။
ခွကေို ပခုံးလောကျ ခှဲရပျထားပါ။ ဒူးနညျးနညျး ကှေးထားပါ။ လကျတှကေို လကျသီးဆုပျ ဒေါငျလိုကျထားပွီး ရှဆေ့နျ့ထားပါ။ အသကျရှုထုတျရငျး လကျသီးတှကေို အလေးကွီး တဈခုခုကို ဆှဲနရေသလို ဆှဲယူလိုကျပါ။ လကျတှေ နံရိုး ရောကျသှားရငျ အသကျရှုသှငျးရငျး ပွနျဆနျ့လိုကျပါ။ တငျးတငျး လုပျပါ။ ၁၅ ခေါကျ လုပျပါ။
ကိုယျအလေးခြိနျကို ညာခွပေျေါ ထားပွီး ရပျလိုကျပါ။ ညာဒူးနညျးနညျးကှေးထားပါ။ ဘယျခွကေို နညျးနညျးလေး ကွှထားပါ။ လကျတှကေို တငျပါးမှာ တငျထားပါ။ ဖွညျးဖွညျးခွငျး ခွဖြေားထောကျပါ။ ထိပျမှာ ရပျပါ။ ပွီးရငျ ပွနျလြော့ပါ။ ခွတေဈခြောငျးကို ၁၅ ခေါကျ လုပျပါ။
နံရံတဈခုကို မကျြနှာမူထားပါ။ လကျတှေ ကွမျးပျေါ ပခုံးထကျ နညျးနညျးကယျြကယျြနဲ့ နံရံက ပဝေကျလောကျ အကှာမှာ ထောငျထားပါ။ ခွနှေဈဖကျစလုံး နံရံကို ထိသှားသညျအထိ ခေါငျးပျေါကနေ နောကျပွနျကနျလိုကျပါ။ ခွနှေဈခြောငျး ပူးထား၊ ခွမေကို ထောငျထားပါ။ ၁၅၊ ၂၀ စက်ကနျ့ ရအောငျနပေါ။
ဘယျလကျသီးကို ဘယျပေါငျပျေါ ထားပါ။ ညာလကျနဲ့ ဘယျလကျကောကျဝတျကို လကျပျေါက ကြျောကိုငျလိုကျပါ။ ဘယျလကျမောငျးကို အပျေါကို ကှေးပါ။ ညာလကျက တှနျးခနြပေါ။ အဆုံးရောကျသှားရငျ ညာလကျတှနျးထားတုနျးမှာပဲ နဂိုပွနျရောကျတဲ့အထိ တဖွညျးဖွညျး လြော့သှားပါ။ လကျတဈဖကျကို ၁၀ ခါစီ လုပျပေးပါ။
မှောကျခုံ လှဲပါ။ ကြောကို မတျမတျထားပွီး ခွခြေောငျးတှနေဲ့ လကျမောငျးတှကေို သုံးပွီး တဈကိုယျလုံး မလိုကျပါ။ ကွာနိုငျသလောကျ ကွာအောငျ တောငျ့ထားပါ။ မတောငျ့နိုငျတဲ့အထိ၊ ကိုယျကှေးလာတဲ့အထိ တောငျ့ထားပါ။
ပုံမှနျ Lunge ပုံစံအတိုငျး ဘယျခွရှေထေု့တျထားပါ။ ဒူးက ခွဖေနောငျ့ အထကျမှာ ရှိနပေါစေ။ ခုနျလိုကျပွီး ပွနျအကမြှာ ညာခွရှေထေု့တျ ဖွဈနပေါစေ။ ဒူးက ခွဖေနောငျ့အပျေါမှာပဲ ရှိရပါမယျ။ ၁၀ ခေါကျ လုပျပါ။
ပုံမှနျ ဒိုကျထိုးတာတှကေ လှယျလှနျးတယျ ဆိုသူတှေ အတှကျပါ။ ဒိုကျထိုးလို့ အပျေါကို ကွှသှားတိုငျး လထေဲမွောကျသှားအောငျ တှနျးပဈပါ။ တတျနိုငျရငျ လကျခုပျတဈခကျြရအောငျ တီးပါ။ ၆ ခါ လုပျပါ။
Previous: အကောင်းဘက်သို့ ပြောင်းလဲလာသော ကော်ဖီ
Next: အပြာကားတွေ ခေတ်မစားခင်က အရသာ